မက်စ် - လီနင်ဝါဒ၊ မော်စီတုန်းအတွေးအခေါ်၊ တိန့်ရှောင်ပိန်သဘောတရား၊
အကွဲကွဲ အပြားပြားနဲ့ အဲဒီအချောင်သမားတွေကြားက
ပစ္စုပ္ပန်မှာတည့်တည့်နေ၊ ယုံကြည်ချက်ကို ရှု့မှတ်
ပြည်တွင်းစစ် မုချ ရပ်ရမယ်
ထိုအလံကို ကိုင်၍ အလေးပြုကြ
၂ - ၅ - ၂၀၁၁
Posted by ဖိုးညို at 2:07 PM 1 comment:
Posted by ဖိုးညို at 8:16 PM No comments:
“ယက်တူရှင်ကို” ကို ကြိုက်တယ်
ဆိုဗီယက်အီလစ်တွေက သူ့ကို မကြိုက်ကြဘူး
“စတာလင်”က သူ့ကို မကြိုက်ဘူး
“စတာလင်” က “ယက်တူရှင်ကို” ကိုမကြိုက်တာ
ငါ က “ယက်တူရှင်ကို” ကြိုက်တာ
အီလစ်တွေဆီမှ တောင်းမှ ရမှာတဲ့လား။
“စတာလင်”ခေတ် ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ခုန်သံကို
၉ - ၄ -၂၀၁၁
Posted by ဖိုးညို at 6:50 AM No comments:
Posted by ဖိုးညို at 6:40 PM No comments:
ထူထူထဲထဲ၊ သိပ်သိပ်သည်းသည်း ကျနေတဲ့အချိန်
အချင်းမာရ်နတ် ... ဖယ်လော့!
အထဲကလူတွေ အပြင်ကို ထွက်ကုန်ကြတယ်
မြေသားကိုထိုးခွဲ ပန်းပွင့်လေးတွေလည်း ပေါက်လာကြတယ်။
လာပြီ ... !
Posted by ဖိုးညို at 4:03 PM No comments:
နောက်တော့ ပြည်မြိုသား အရှည်ကြီး တောခိုလာသည်။ သူနှင့်အတူ ပြည်မြို့သား ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ်၏ ကဗျာတွေကို လက်ရေးနှင့် ကူးယူထားသည့် မှတ်စုစာအုပ်ပါလာသည်။ ထိုစာအုပ်သည် တော်လှန်ရေးနယ်မြေထဲရောက်သည့်အချိန်က ပထမဆုံး ဖတ်ရသည့် ကဗျာစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင် နေစဉ်က ဆရာချောနွယ်ကဗျာတွေကို ဖတ်ရသော်လည်း ဤမျှလောက် တထိုင်တည်း များများစားစားကို မဖတ်ဖူးခဲ့။ ဆရာချောက ကျနော်တို့ကို ဖမ်းစားသွားခဲ့ပြီ။ ကိုတိုက်မောင်းကတော့ ဆရာချော ကဗျာ တွေဖတ်ပြီး “ကျနော်တို့တော့ ကျန်ခဲ့ပြီဗျိုးးး” လို့ဆိုလာသည်။ ဆရာချောရဲ့ ကဗျာတွေ ကျနော်တို့အပေါ် ဒုတ်ဒုတ်ထိ စိုက်ဝင်ခဲ့သည်ကတော့ သေချာသည်။
ထိုစဉ်က ကျနော်တို့နေသည့်နေရာက “လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု (လပဒတ)” တည်ရာနေရာ။ ထိုနေရာတွင် နေကြသူများကလည်း စာဖတ်ကြသူတွေ၊ စာဖတ်နာသူတွေ၊ စာစုံဖတ်သူတွေ။ ဂျူးရဲ့ “မရှိမဖြစ်မိုး” လည်း ဖတ်နိုင်သည်။ “ရုပ်ကမ္ဘာ” လည်း ဖတ်နိုင်သည်။ နောက်တော့ ထိုတပ်ပေါင်းစုက “သေနတ်သံ ဂျာနယ်” ဟူ၍ ထုတ်လာသည်။ ထိုဂျာနယ်တွင် စာတွေဝင်ရေးကြသည်။ မှတ်မိနေသည်က ထိုဂျာနယ်ကို ကိုင်တွယ်သူ အယ်ဒီတာက ရဲဘော်အေးသန်း။ ဆောင်းပါးတစောင်ရေးသည်။ “ကျနော်သိသော ကွန်မြူနစ်ဝါဒ”။ ထိုဆောင်းပါးသည် အခြားကျနော်နှင့် အတူရေးသူများကြားမှ တပုဒ်လုံး ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည့် ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူလိုက်မိသည်ကို ရိုးသားစွာဝန်ခံလိုပါသည်။ နောက်တအုပ်တွင်တော့ ကဗျာရေးဖြစ်သည်။ “ကမ္ဘာပုတ်ခြင်း”။ ထိုခေါင်းစည်းကို ကျနော်ပေးခဲ့သည်တော့မဟုတ်။ ကျနော့်တောင်းဆိုချက်ဖြင့် အရှည်ကြီးပေးခဲ့သည့် ခေါင်းစည်းဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာ ဂျာနယ်သို့ သွားပေးသည့်အခါ အယ်ဒီတာ ရဲဘော်အေးသန်းက “ခင်ဗျားပေးတဲ့ကဗျာကို ကျနော်တော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကဗျာကောင်းလို့တော့ ထင်တယ်” ဆိုပြီး ပြုံး၍ပြောသည်။ နောက်စာအုပ်ထွက်တော့လည်း ပါလာပါသည်။ ထိုကိစ္စကို အခု ပြန်စဉ်းစား မိတော့ နည်းနည်းတော့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်မိသည်။ “သေနတ်သံ ဂျာနယ်” ကို အယ်ဒီတာလုပ်နေသည့် ရဲဘော်အေးသန်းသည် ကဗျာဆရာအောင်ငြိမ်း ဖြစ်နေသည်ကို နောင် ၁၀ နှစ်လောက်ကြာမှ သူ၏ လုံးချင်း ကဗျာစာအုပ်ထွက်လာတော့မှ သိရတော့သည်။ ကျနော်က ထိုသို့ဖြင့် နုံပါသည်။ မည်သို့ပင် နုံခဲ့သည်ဖြစ်စေ ရဲဘော်အေးသန်းသည် ကျနော်၏ ပထမဆုံး အယ်ဒီတာ ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုတော့ ယနေ့တိုင် စိတ်ထဲစွဲနေမိသည်။
Posted by ဖိုးညို at 4:28 PM No comments: